SKU: 5984-59-8 Category: Kuonda
Raw (1,5-dimethylhexyl) ammonium powder (5984-59-8) chloride Tsanangudzo
Kemikari Name Raw (1,5-dimethylhexyl) ammonium powder chloride; 2-Heptanamine, 6-methyl-, hydrochloride (1: 1)
muchiso Name Raw (1,5-dimethylhexyl) ammonium powder chloride
Kirasi yeMishonga Specialty Chemicals
Molecular Wsere 165.7041
Kubikira pfungwa 229.3 ° C pa 760 mmHg
Biological Half-Life inoramba iri mumvura (hafu yeupenyu 2 mazuva)
Skukodzera iSoluble mu-liquid ammonia, hydrazine, Zvinyoro zvigadziriswa muacetone Isingasviki mu diethyl ether, ethyl acetate
APane anoshandiswa se systemic acidifying agent mukurapa kwehutachiona hwemagetsi ealkalosis, mumuromo weAidyid loading loading kuti uongorore distal renal tubular acidosis, kuchengetedza urini paA acid pH mukurapa kweimwe urinary-tract disorders.
mbishi (1,5-dimethylhexyl) ammonium chloride powder (5984-59-8) Tsanangudzo
Raw (1,5-dimethylhexyl) ammonium powder chloride inorganic compound ne formula NH4Cl nemuchena mutsvuku wakanyanyisa mumvura. Zvigadziriswe zve ammonium chloride zvakanyanyisa acidic. Sal ammoniac ndiro zita rechisiko, mineralogical form of ammonium chloride. Iyo mineral inowanzoumbwa pakupisa mabhasi emarara kubva pakugadziriswa kwemagesi anotsva marara. Inowanikwawo kune dzimwe mhando dzemhepo inopisa. Inonyanya kushandiswa semafuta uye inyanzvi inopisa mune mamwe marudzi ewaini. Icho chibereko kubva pane zvakaitwa ne hydrochloric acid uye ammonia.
(1,5-dimethylhexyl) ammonium chloride powder (5984-59-8) Mechanism of Action
Local anesthesia inokonzerwa nehutongi hwekushandisa shanduko dze hydrochloride kana kuti zvisingabhadharwi zve 2-Amino-6-methylheptane kumeso eruvhu. Intravenously muimbwa dzinopesvedzwa ne pentobarbital sodium, 2-Amino-6-methylheptane hydrochloride zviratidzo 1 / 500-1 / 1000 basa repressphrine. 2-Amino-6-methylheptane hydrochloride inowanikwa kukonzera kuwedzera kwechimiro chemwoyo uye ukuru hwekudzivirira. Intravenously in imbwa, inethetized with pentobarbital sodium, mizinga ye 0.5 kusvika 1.0 mg kilogiramu yemuviri we2-Amino-6-methylheptane hydrochloride haigone kuonekwa pamucheche muduku, kubvisa chisungo chekuvhenekera, kuvhara kwemuviri kana kupumha. Intraperitoneally mumakonzo, 2-Amino-6-methylheptane hydrochloride inowanika kunge inenge isingabatsiri nheyo yepamusoro yenyoka inokurudzira chiito mune zvisiri izvo zvinodhaka. Hapana uchapupu hwehudziro hwekutsamwirwa kwetracheo-bronchial muti mucosa inoratidzwa mumarara kana rats inounza 2-Amino-6-methylheptane yega yega yezuva nezuva ye10 uye 30 mazuva anoenderana.
shandisa ye (1,5-dimethylhexyl) ammonium chloride powder (5984-59-8)
▪ Kutamba basa.
▪ Kuora muviri kunorema.
▪ Semishonga inotakura mishonga ye octamylamine
Yakakurudzirwa (1,5-dimethylhexyl) ammonium chloride powder (5984-59-8) Dosage
Hapana hurumende inorayira mazano akaiswa (1,5-dimethylhexyl) ammonium chloride, zvisinei nokuti yakadzidziswa nezvemhuka uye kufanana kune DMAA, chirwere chakachengeteka chinogona kuchengetedzwa chaizova 1mg / kg ye bodyweight kusvika ku160mg. I-LD50 (inonzi inoda kuuraya hafu yemhuka dzose dzekuedza) ye (1,5-dimethylhexyl) ammonium chloride kune mice ndeye 59mg / kg. Zvakare, zvakanakisisa kunamatira nemaitiro ekuchengetedza kwezvino uye zvakanaka, tsvakurudzo dzakawanda dzinofanira kuitwa mushure mekunge zvakasunungurwa kubudiswa mune zvekuwedzera. Nguva yekuchenjera, zvakanakisisa kutenga 30-60 maminitsi mushure mekuvhima kuti ubatsire kusimbisa zvinhu zvekudzidziswa, nepo zvingatorwawo zuva rese sechishuvo chinodzvinyirira.
Kubatsira kwe (1,5-dimethylhexyl) ammonium chloride powder (5984-59-8)
♦ Kuita sevana bronchodilators (kuwedzera kwebronchi kuti uwedzere kufema kwemhepo)
♦ Basa reDongestestant (kudzivirira mishonga yeropa kuderera kwekudzivirira uye nekudaro unyanzvi hwekufema).
• Kukurudzira kugadziriswa uye chido chisina simba chakanyanyisa.
♦ (1,5-dimethylhexyl) ammonium chloride inogona kushandiswa pakusimudza ndiko kukwanisa kwayo kukudziridza hutano hwemhepo nekusimudzira kutarisa nekucherechedza.
♦ (1,5-dimethylhexyl) ammonium chloride powder inobata sarimwe yakafanana kune zvigadzirwa zvinowonekwa se monoamine kusunungura vashandi. Icho chikonzero, chinogona kuwedzera huwandu hwemonoamines dzakadai sedopamine uye noradrenaline.
♦ Zvinogona kutsigira zvakanyanya kushanda uye kuderedza RPE (muyero wekuona uchiedza).